Ngabe uRoblox Uyavala? Cha, Awakholelwa Amahemuhemu! - Ukudlala
Ukuvalwa kweRoblox kuzoba imbangela yokudabuka kwenhliziyo kwezigidi zabantu kwi-intanethi. Ingenye yezinkulu kakhulu mahhala ukudlala imidlalo yabadlali abaningi ku-inthanethi. Izigidi zentsha zidlala lo mdlalo. Ifinyeleleka kalula futhi ikunikeza ipulatifomu yokwakha amathani ezinkumbulo. IRoblox iyinkundla yokudlala yabadlali abaningi edumile evumela izinhlelo nokudlala imidlalo. URoblox ugcizelela ubuhlakani nomphakathi.
Yasungulwa nguDavid Baszucki no-Erik Cassel ngo-2004 futhi yakhishwa ngo-2006. Ingesinye sezinkundla zemidlalo ezinkulu kunazo zonke emhlabeni, esinabasebenzisi abangaba yizigidi ezingama-48. Umdlalo unabadali bomdlalo abangaphezu kwezigidi ezingama-64 abangenza amamephu abo. Umphakathi ubanzi, futhi noma ngubani angajoyina isenzo.
Imihlahlandlela eminingi yeRoblox:
Dlala i-Roblox ku-Chromebook
I-Roblox FPS Unlocker ivunyelwe Ukusetshenziswa?
Ngabe uRoblox Uyavala?
Vele akunjalo. Amahlebezi nezindaba ezingezona zokuvala kukaRoblox kwaqhamuka ngo-2019, futhi okumangazayo ukuthi i-buzz ayikaze ishiye ukuhlala njengamahemuhemu. Le nkulumo yakhuphula ukuthandwa kwayo ngoJulayi. Abadlali emhlabeni jikelele badunyazwa ngezinga elikhulu. Abalandeli baphatheke kabi ngokuphindelela kwalelihlebezi. Abalandeli bazizwe bengenakusiza futhi bathumela ukukhathazeka kwabo ngale ndaba (bekholelwa ukuthi iyiqiniso) kokuthunyelwe kokubuyekezwa kwe-akhawunti esemthethweni ye-Twitter kaRoblox.
Ngaphezu kwalokho, okunye ukuphawula okwethusa okufana ne- “R.I.P. URoblox ”wenze i-fanbase yaya ehlane. Amahlebezi athi futhi uRoblox uyavala “ngenxa yokugcwala kwabantu, abanayo imali yokugcina izinsiza,” futhi iyavalwa ngoMashi 22, 2020. Abalandeli emhlabeni wonke bakholelwa ukuthi kunikezwe ukuthandwa lomdlalo. NgoJanuwari 2020, ama-tweets asemthethweni eRoblox Corporation afana nesipikili ekhanda lamahlebezi, 'ukwenza izinto ziqonde uRoblox akavali futhi akakholelwa yonke into evela ku-inthanethi.'
Ukubuyisa umthombo wale mahemuhemu nokuqagela ngemuva kwalokho, kubuyela emuva kuReact 2424, ipulatifomu evumela abasebenzisi bayo ukuthi bakhiqize izindaba ezingezona futhi benze abangane babo, kubenze bakholelwe ukuthi izindaba mbumbulu zingokoqobo. Abasebenzisi besiza bakha futhi bashicilele imininingwane yomgunyathi ngokungaziwa. Futhi-ke, amahemuhemu azalwa. Ake sithi unaka ezansi kwe-athikili eyenziwe yileyo webhusayithi ngokumelene noRoblox ukuvala. Uma kunjalo, ithi 'lena yiwebhusayithi yokuzijabulisa, futhi abasebenzisi bayayakha imibhalo. Lawa amahlaya futhi aqanjiwe; akufanele ithathwe ngokungathi sína noma njengomthombo wolwazi ’.
Kepha akekho owanaka lesi sitatimende. Akekho owayenombono wemiphumela nokuthi yayizoba negciwane kangakanani, noma. Ngaphandle kweqiniso elisobala lokuthi i-athikili iyi-prank, yabelwe izikhathi ezingaphezu kuka-80,000. Yize kungenangqondo la mahemuhemu, abanye abalandeli abazinikele bawuthatha ngokungathi sína futhi bakha iqembu labantu abayizinkulungwane eziyishumi ukumisa uRoblox ekuvalweni.
Kusukela kumahemuhemu okuvala iMinecraft neRoblox manje, inani lezindaba likungabaza ukuthembeka. Kepha uRoblox uthathe udaba ezandleni zabo futhi waqinisekisa i-fanbase, umdlalo awuyi ndawo, ngakho-ke asikho isizathu sokukhathazeka kwasekuqaleni. Ngenkathi amahemuhemu afana nalokhu ekhasa phezu kwe-inthanethi, ngokuxakile ukuthi izibalo zisho okwehlukile.
URoblox uvumela abadali ukuthi benze imali ngezinto abazenzayo ngokuthengisa amaphasi womdlalo. Ku-2017, abadali beRoblox kubikwa ukuthi bathola cishe amakhilogremu ayizigidi ezingama-20 ekukhokhelweni. Ngo-2018, inani lakhuphuka cishe ngamakhilogremu ayizigidi ezingama-50, kwathi ngoMeyi 2019, iBusiness Insider yabika ukuthi uRoblox ubiza ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili namashumi amabili nambili. Ngaphezu kwalokho, uRoblox urekhode abasebenzisi abasebenzayo abayizigidi eziyi-100 ngenyanga futhi wenza amakhilogremu angama-770 ngemali engenayo. Lezi zibalo zifakazela ukuthi uRoblox akasondele neze ekuvaleni ipulatifomu.
Njengoba isisho sithi, 'amanga ahamba ngokushesha kuneqiniso' besingeke sibe khona isibonelo esifanelekile ngaphandle kokucaphuna isiphithiphithi nokucabanga okubangelwe yilelihemuhemu elithile.
Ungawahlola kanjani amahemuhemu?
Bheka ukuthi hlobo luni lwenhlangano olushicilele lo mbhalo.
Bheka i-URL nganoma yisiphi isizinda ongajwayelene naso.
I-Google iyinhloko yokubheka ukuthi ngabe kukhona imibiko nezehlakalo ezihambisana netimu.
Bheka ukuthi umbhali ucaphune yini ngcaphuno.
Bheka amaqiniso asebenza njengobufakazi.
Chofoza lapha ukubheka isimo samaseva weRoblox njalo. Kuzokusiza ngezindlela eziningi ukuqinisekisa ukuthi yonke into isebenza kahle.
Ungayidlala kanjani iRoblox?
URoblox udlalwa kalula kuwo wonke amapulatifomu ane-akhawunti elula yamahhala. Ungayidlala naku-PC, i-XBOX, i-PS4, i-Android, ne-iOS. Abasebenzisi bangabhalisa ngokushesha ngama-akhawunti abo e-Facebook kuwebhusayithi. Kulula ukufinyelela futhi akudingi noma yikuphi ukuthenga. Kunamathani wemidlalo ngaphakathi kwalo mdlalo. Umphakathi unemfashini futhi unechibi labadlali abasangene. Ungakha futhi imidlalo ngesitudiyo sonjiniyela iRoblox. Nazi izinyathelo zokubhalisela i-akhawunti yeRoblox.
Ungaqala ngokwakha i-akhawunti yeRoblox endaweni yesikhulumi. Kulula ukuyisebenzisa futhi ayidingi imizamo eminingi. Abasebenzisi bangakha ukusebenza kwabo ngokusebenzisa iwebhusayithi.Ungachofoza kulokhu isixhumanisi . Kuzokusa ekhasini lokubhalisa.
Ekhasini eliyisiqalo, uzothola inketho yokubhalisa. Ungafaka imininingwane efanele njengosuku lwe-imeyili yokuzalwa, nokunye okuningi. Lokhu kubalulekile ukuqala ukudlala imidlalo yakho. Abasebenzisi bangabhalisela futhi ngama-akhawunti wezokuxhumana. Chofoza kunkinobho yokubhalisa.
Voila! Manje i-akhawunti yakho isiyasebenza. Abasebenzisi bangaqala ngokushesha ukudlala imidlalo emangalisayo kuhlelo lokusebenza. Itholakala kuwo wonke umuntu ongayisebenzisa. Imidlalo iyamangalisa.
Ngokuya ngeminyaka esiphila kuyo, ngaso sonke isikhathi kuwukuhlakanipha ukuqinisekisa noma yini nakho konke esikufunda ku-intanethi. Kungaba yindatshana noma i-Whatsapp phambili, futhi kufanele sihlole ukuthembeka kwabo ngaphambi kokukuhlanganyela nabanye. I-Intanethi akuyona indawo yokuba nomzwelo. Ngenkathi ezinye izingcezu zezindaba zingasivusa ngokomzwelo, kufanele sicabange ngokunengqondo. Njengakulesi simo, URoblox unabasebenzisi abasebenzayo abacishe babe yizigidi eziyi-150 ngenyanga abasiza ipulatifomu yokudlala ukuthi ikhiqize imali enkulu eyi- $ 770 million cishe. Kwenza kube yinto ethandwa kakhulu ukuthi ingavalwa.
Kwaze kwaba yi-tweet esemthethweni kaRoblox lapho abalandeli babona khona ukuthi konke kwakuyinkohliso leyo. Umdondoshiya wezokudlala uRoblox unikeze abasebenzisi bawo izeluleko ezidingeka kakhulu ngokubacela ukuthi bangathembi konke abakubonayo nabakufundayo ezinkundleni zokuxhumana.
Qiniseka,URoblox akacimi manje, hhayi noma nini ngokushesha.
Amakhodi Ephromo kaRoblox
lapho ongabuka khona imidlalo online mahhala
ama-movie wamahhala ku-inthanethi akukho ukubhaliswa noma ukulanda
indawo engcono kakhulu yokubuka ama-movie aku-inthanethi
thola i-hulu nge-spotify premium
ungayifaka kanjani i-robux esikhwameni seqembu
ikhodi yomgwaqo yakudala yedolobha ye-roblox